लकडाउनसँगै तपाईंको सवारी साधनको इञ्जिन लक भएको त छैन ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more लकडाउनसँगै तपाईंको सवारी साधनको इञ्जिन लक भएको त छैन ?
लकडाउनसँगै तपाईंको सवारी साधनको इञ्जिन लक भएको त छैन ?
बैशाख २६ गते, २०७७ - १४:३०
चितवन । लकडाउनमा सबै घरमा ‘लक’ हुनुभएको छ । यो सँगै आफ्ना सवारी पनि घरमै थन्किएका छन् । तर थन्किएका सवारीलाई समय समयमा सञ्चालन(स्टार्ट) नगर्दा सवारीको इञ्जिन पनि लक हुने सम्भावना हुन्छ ।
विज्ञहरुले कम्तीमा हप्तामा एकपटक १० देखि १५ मिनेट सवारीलाई स्टार्ट गरेर राख्न सुझाव दिएका छन् ।
देशभरका तराई, भित्री मधेश र पहाडी बजार क्षेत्रमा अधिकांश घरमा दुई वा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन छन् । यसका अतिरिक्त उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निर्माण कम्पनीमा यतिबेला सवारी साधन थन्किएर बसेका छन् । अत्यावश्यकबाहेकका सवारी सञ्चालनमा आएका छैनन् । ती सवारीको ख्याल नगर्दा ठूलो नोक्सान हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
सडक विभागका मेकानिकल इञ्जिनीयर जितेन्द्र सिंह हप्तामा एकपटक १० देखि १५ मिनेट सवारी साधन स्टाट गर्नुपर्ने बताउछन्। उनले भने, “समय समयमा स्टाट गर्दा ब्याट्री डिस्चार्ज हुँदैन, मोबिलको गुण हराएर जाँदैन, इन्धन पम्प, एयर फिल्टर, इन्धन फिल्टरमा खराबी आउँदैन ।”
लामो समय स्टार्ट नगरी राख्दा ब्याट्रीसहित इञ्जिनमा क्षति हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, “लामो समय सवारी साधन थन्किँदा इञ्जिनको भल्वमा कार्बन जम्ने, सवारी स्टार्ट गर्न गाह्रो हुने, स्टाट भए पनि लाइनरमा दाग बसेर क्षमता कमजोर हुन्छ ।” यसले इञ्जिन प्रभावित बनाएर पुनः मर्मत गर्नुपर्ने र ब्याट्री काम नलाग्ने अवस्थामा पु¥याउने उनले बताए ।
घरमा लकडाउनमा बसिरहँदा आफ्नो सवारीको ख्याल गर्न सुझाव दिँदै उनले समय समयमा स्टाट गर्न र सरसफाइमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरे ।
बैशाख २६ गते, २०७७ - १४:३० मा प्रकाशित